Dugsiga Sare Ee Tuulada Laylakaal Oo Xadhiga Laga Jaray. - Cakaara News
Dugsiga Sare Ee Tuulada Laylakaal Oo Xadhiga Laga Jaray.
Laylakaal(cakaaranews), talaado, 29ka November, 2016. Masuuliyiin uu hogaaminaya gudoomiyaha degmada harawo ayna ku wehelinayaan shaalaqaha ciidanka booliska gaarka ah qaybta ka hawlgasha degmada harawo ayaa xadhiga ka jaray dugsiga sare oo laga hirgaliyay tuulada laylakaal oo ka tirsan degmada Harawo ee Gobolka Faafan.
Waxaana ka hadlay munaasabadii xadhig ka jarka dugsigan sare gudoomiyaha degmada harawo mudane Cabdikariin Ciise oo ugu horayntii u mahad celiyay bulshada ku dhaqan tuulada laylakaal sida fir fircoon ee ay uga qayb-qaateen dhismaha dugsigan sare ee tuulada laylakaal. Isaga oo ka warbixiyay ahmiyada uu u leeyahay bulshada ku dhaqan laylakaal iyo nawaaxigeeda kana qayb qaatan doona dadaalada kor loogu qaadaya tayada waxbarashada deegaanka gaar ahaan bulshada ku dhaqan degmada hawaro.
Dhankooda qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan tuulada layla-kaal ayaa soo dhaweeyay xadhig ka jarka dugsigan sare waxayna ka warbixiyeen baahida waxbarasho ee loo qabay furitaanka dugsigan sare iyaga oo intaasi ku dareen in ay ilaalinayaan daryeelka dugsigan sare kagana maarmayaan waxbarashadii dugsiyada sare ee meelaha ka fog tuuladan laylakaal loo doonan jiray.